कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप कतिले लगाए ? | गोठालो खबर – सूक्ष्म समाचार , डिजिटलको आधार
कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप कतिले लगाए ?
१३ भाद्र २०७८, आईतवार १६:४८
काठमाडौं, १३ भदौ । कोरोना भाइरस विरुद्धको पूर्णमात्रामा खोप नेपालमा हालसम्म ४० लाख ५२ हजार ७ सय ६५ जनाले लगाएका छन् । त्यस्तै, खोपको पहिलो मात्रा ५० लाख ६३ हजार ५ सय २२ जनाले लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको अनुसार देशभर भेरोसेल खोप हालसम्म ३० लाख १२ हजार ४ सय ४५ जनाले लगाएका छन् भने खोपको दोस्रो मात्रा ८ लाख ५७ हजार २ सय ४७ जनाले लगाइसकेका छन् । त्यस्तै, देशभर भेरोसेलको दोस्रो खोप १६ लाख ४५ हजार २ सय ३८ जनाले लगाएका छन् । बाग्मती प्रदेशमा भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा १२ लाख ८७ हजार ९ सय १६ जनाले लगाएका छन्। दोस्रो मात्रा ८ लाख ५७ हजार २ सय ४७ जनाले लगाएका छन्।
यसैगरी, बागमतीमा जोन्सन एण्ड जोन्सन खोप हालसम्म ३ लाख ३६ हजार १ सय ४८ जनाले लगाएका छन् भने देशभर १३ लाख ४७ हजार ७ सय ४९ जनाले लगाएका छन् । त्यस्तै, कोरोना विरुद्धको जापनमा बनेको एस्ट्रोजेनिका खोपको पहिलो मात्रा देशभर २० लाख ५१ हजार बढीले लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । खोपको दोस्रो मात्रा हालसम्म १० लाख ५९ हजार ७ सय ७८ जनाले लगाएका छन् । बाग्मती प्रदेशमा एस्ट्रोजेनिका खोपको पहिलो मात्रा लगाउनेको संख्या ५ लाख ५७ हजार ९ सय २० जना र दोस्रो खोप लगाउनेको संख्या ३ लाख ६२ हजार २ सय २६ रहेको छ ।